नेकपा एकीकरण पूर्णताको अर्थ
३ जेठ २०७६, शुक्रबार
नेकपाको एकीकरणले पूर्णता पायो, देशले चाहिँ के पायो ? अब यो प्रश्न उठ्नेछ । यो एक वर्षमा नेकपाको सरकारले जति दिन सक्नुपर्थ्याे, जति गर्न सक्नुपर्थ्याे, त्यो नसकेको सत्य हो । यसका पछाडि पार्टी एकीकरणले पूर्णता नपाउनु पनि एउटा कारण हो । अब एकीकरणले पूर्णता पाएको छ, यो सरकारले विगतमा भन्दा तिब्र गतिमा काम गर्न सक्ने आशा जगाएको छ ।
वस्तुत यो सरकार सवा एक वर्ष त्रिशंकु हालतमै चल्यो । भन्नका लागि दुई तिहाईको सरकार भनिए पनि सत्य त्यो होइन । नेकपासँग दुई तिहाई छैन, बहुमत मात्र छ, सरकारसँग रहेको ‘दुई तिहाई’ प्राविधिक मात्र हो । आफ्नै पार्टीको बहुमतभित्र पनि सरकार अल्पमतमा थियो, किनभने एकीकरणले पूर्णता पाएको थिएन । बाहिरबाट देख्दा बहुमतको मात्र नभएर दुई तिहाईकै देखिने तर भित्र चाहिँ लड्खडाउँदै उभिनुपर्ने हालतमा थिए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । यस्तो अवस्थाको निराकरण भएको छ एकीकरणले पूर्णता पाएपछि ।
पार्टी एकीकरण र विभाजन नेपालका लागि सामान्य भइसकेको छ । तथापि, कतिपय एकीकरण र विभाजनले मुलुकको राजनीतिलाई दूरगामी प्रभाव पारेको छ । ०४७ मा तत्कालीन माले र मार्क्सवादीकाे एकीकरणले प्रभावशाली एमाले जन्मायो । ०५५ सालमा एमालेको विभाजनले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिगमनलाई सघायो, माओवादी हिंसालाई मनोवैज्ञानिक मलजल गर्यो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको विभाजनले प्रतिगमनलाई अपरिहार्य बनायो । तर, पछि कांग्रेस एकीकृत बन्यो र संसदीय धारको अग्रणी बन्यो । गत वर्ष जेठ ३ मा भएको एमाले र माओवादीको एकीकरणले मुलुकलाई बहुमतको स्थिर सरकार दियो । उता, त्यसअघि भएको माओवादीको विभाजनले हिंसा तथा अस्थिरतावादी उग्र समूह पनि जन्मायो ।
अर्थात्, पार्टी एकीकरणले सकारात्मक र विभाजनले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर, एमाले र माओवादीको एकीकरण भने विगतका एकीकरणभन्दा भिन्न रह्यो । एक वर्षसम्म एकीकरणलाई पूर्णता दिन सकेन । राजनीतिक तथा कानूनी एकीकरण भइसकेपछि बाँकी संगठनात्मक एकीकरण राष्ट्रिय राजनीतिको यति ठूलाे चासोको विषय नबन्नुपर्ने हो तर बन्यो ।
एकीकरणले पूर्णता पाएपछि सरकारले अझ शशक्त बनेर काम गर्न सक्छ भन्ने जनअपेक्षा छ । अर्काे कुरा, राजनीतिक अस्थिरताले लामो समय पीडित भएका जनता एकीकरणको पूर्णता पछि अस्थिरता पूर्ण निमिट्यान्न हुन्छ भन्ने विश्वाशमा छन् । यही कारण नेकपाको एकीकरणले पूर्णता पाउने विषय आम चासोको विषय बन्न पुग्यो ।
आजबाट नेकपाको एकीकरणले पूर्णता पाएको मानिनुपर्छ । एकीकरणबाट मुलुकले स्थिर सरकार पायो, एकीकरणको पूर्णताबाट चाहिँ के पाउँछन् ? मुख्य प्रश्न यही हो । नेकपासँग बहुमत भए पनि सरकार अस्थिर बन्ने त्राश जनतामा रहँदै आएको छ । किनभने बहुमत प्राप्त पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री गिराउने दुर्दान्त खेल विगतमा नेपाली जनताले ब्यहोरिसकेका छन्, त्यस्तै खेल फेरि पनि भोग्नुपर्ला भन्ने त्राश जनतामा छ । त्यस्तो त्राश अब नेकपाले निर्मुल गर्न सक्नुपर्छ । नेकपासँग ६ वटा प्रदेश सरकार छन्, ती सरकारले पनि अब अझ शशक्त काम गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात्, एकीकरणको पूर्णता नेकपाको आन्तरिक विषय हो तर त्यसको फल चाहिँ मुलुक र जनताले पाउनुपर्छ । अनि मात्र एकीकरणले पाएको पूर्णता सार्थक बन्नेछ ।